Guddoomiye Cirro: “Sababaha Sicir Bararka keenay Waxaa Kamid Ah DP World Iyo Qaadka” – Goobjoog News
Guddoomiyaha xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxaa uu xukuumadda Somaliland ku eedeeyay in ay waxba ka qaban kari wayday sicir bararka dalka ka jira.
Guddoomiye Cirro wuxuu sheegay in sababaha sicir bararka keenay ay kamid tahay lacago adag oo shirkadaha qaadka iyo shirkadda DP World ay dalka dibaddiisa u diraan.
“Sababaha sicir bararka keenay waxa kamid ah DP World sida ay ii sheegeen sarriflayaashu DP World waxay adeegga ku qaadataa Somaliland Shilin habeenkiinna waxay ku badalataa doollar sidoo kale qaadka oo dadka inta badan cunaan isna waxaa lagu iibiyaa Somaliland shilin habeenkiinna waxaa lagu badalaa doollar” ayuu yidhi Guddoomiye Cirro
Guddoomiye Cirro waxa kale oo uu sheegay in sababaha sicir bararka keenay ay kamid tahay dhoofka xoolaha ee istaagay.
Sidoo kale musuq-maasuqa ayuu sheegay in uu qayb ka yahay sicir bararka ka jira Somaliland.
Guddi Loo Saaray Fatahaadda B/weyn